kawaran hadaad maalin walba cuntid Xabad Tufaaxa? .. Jawaab khubarada sayniska – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka kawaran hadaad maalin walba cuntid Xabad Tufaaxa? .. Jawaab khubarada sayniska
kawaran hadaad maalin walba cuntid Xabad Tufaaxa? .. Jawaab khubarada sayniska
Daraasaduhu waxay soo jeedinayaan in tufaaxu uu noqon karo cunno caafimaad leh oo leh nafaqo aad u sarreysa.Waxay hodan ku tahay fiberka jirka, antioxidant-ka iyo flavonoids, taas oo ka dhigaysa mid kamid ah cunnooyinka ugu fiican wadnaha.
Dhowr daraasadood oo saynis ah ayaa lala xiriiriyay halista hoose ee sonkorowga iyo miraha tufaaxa si joogto ah, sida laga soo xigtay Standard Media.
Tufaaxa waxaa ku jira nafaqooyin waxtar leh oo dhiirrigeliya bakteeriyada mindhicirka wanaagsan oo ay ku jiraan xeryo ka caawiya la-dagaallanka asmada iyo ka hortagga kansarka waxayna waxtar u leeyihiin miisaanka oo yaraada.
Dhakhaatiirta iyo khubarada nafaqada leh ayaa leh hal tufaax dhexdhexaad ah oo ka kooban 95 kalooriyo ah, iyo sidoo kale xayr, taas oo qofka ka dhigaysa mid dhammaystiran, taas oo ka dhigaysa inuu helo cunno kufiican kuwa doonaya jirdhiska.
Tufaaxa waa la cuni karaa, waa la karin karaa, waa la qalajin karaa ama waa lagu cabi karaa, waxaana jira in kabadan 100 nooc oo tufaax ah adduunka, oo 8 ka mid ah ay ku koreen Kenya.
Dad badan oo raaca raashin caafimaad qaba waxay isticmaalaan subagga looska, oo ah mid fudud, nafaqo leh oo caafimaad leh, isla markaana caloosha si dhakhso ah u buuxisa, iyadoo sare u qaadaysa dareenka buuxsashada.
nooca tufaax qallalan oo la qalajiyey, oo aad u eg oo kale baradho baradho ah, ayaa carruurta u fiican oo caafimaad u beddelanaya.
Apple pie, waa mid ka mid ah hilibka loo jecel yahay ee maqaayadaha badan iyo makhaayadaha, waa mid ka mid ah suxuunta macmacaanka badan, gaar ahaan maadaama ay ku yar tahay kalooriyeyaasha.
Previous articleMaleeshiyaad Hubeysan Oo Dilay Dad Soo Aasay Meyd
Next articleMareykanka Oo War Kasoo Saaray Duqeyn Ka Dhacday Buuraha Golis